ချက်တင်ကစားတဲ့အြန္လိုင္း ၁၀၀၀ - ဗီဒီယိုချက်တင်-အကောင်းဆုံး!
ငါအရပ်ရှည်ရှည်ပေနှင့်အားကစား၊ကျွန်တော်မီတာအတည်းတစ်ယောက်၏တစ်နှစ်အသက်၊လက်ထပ်ဘယ်တော့မှ၊ငါဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊ကောင်းခန်း၊ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၊နှင့်အပြုသဘော။ မင်္ဂလာပါ၊ငါကိတ်ဂိုအားဖြင့်အမည်တစ်ခုတည်းလက်ထပ်ဘယ်တော့မှ၊ငါသွားအဖြစ်၊ နှင့်မေတ္တာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ငါအမှန်တကယ်ရှာဖွေနေနှင့်ချစ်ခြင်း။ ငါရှာနေတာပါအနက်ထားဆက်ဆံရေးအကြောင်းမှဦးဆောင်မည်သည်ငါအဘို့ရှာ နှင့်အတူတစ်ဦးကောင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ဦးအသက်တာသစ်ကိုစတင်ရန်။ ငါရိုးရှင်းပြီးဆင်းမြေကြီးလွယ်ကူသွားဖို့လွယ်ကူသော။ ငါ၏အလွန်အနည်းငယ်သောသူနေဆဲအတွက်ယုံကြည်။ ကျွန်မဟာရှာကြံအကြောင်းနှုန်း။ ကျွန်တော်ကိတ်။ တစ်ခုတည်းနဲ့ဘယ်တော့မှပြီးထောင်မပြုမီ၊အလုပ်ကြိုးစားနှင့်လွတ်လပ်ရေးအမျိုးသမီးငယ်၊မိရှာသည်ငါ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ ရင့်ကျက်။ ငါဖြစ်၏တစ်ဦးအထူးအမျိုးသမီးဖြစ်ချင်သောချစ်အပ်သဖြင့်စောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားသောသူတစ်ဦးသားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တစ်ခုတည်းငါအဘို့အရှာနေသောလူလိုသူဖြစ်လိမ့်မည်။ နံနက်အားဖြင့်အမည် ။ ကိုလိုက်ရှာများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ အနက်အစည်းအဝေးကိုအမှန်။ ငါသည်အမီအဆင်းမြေကြီးပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အလွန်လွယ်ကူဂရမ်။ ပါရှာကြံတွေ့ရှိရန်တာဝန်ရှိသောနိုင်ချစ်မြတ်နိုးရအတူပြန်လာအတွက်။ ငါလိုလူတဲ့ငါ့ကိုတစ်ဦးသောမိန်းမကဲ့သို့ခံစားရ။ ကျွန်မတကယ်လိုအပ်တဲ့စံနှုန်း။ နိုင်သူဖြစ်ရပ္ဆိုအတူငါ့ကိုငါအံ့သြဖွယ်သည်၊တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏နှလုံးသားရွှေစင်၊အမျိုးသမီးတစ်ဦး သင်ဖို့ကိုချစ်လို။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ဖုန္း ကျွန်တော်ဟာနှစ်အရွယ်စိတ်ရင်းမှန်နှင့်ရှာဖွေနေအမျိုးသမီးများအတွက်မှန်ကန်သောနှင့်ယောက်ျားတစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ရန်လိမ့်မည်အကြောင်းကြား။ ဟစ်စပန်းနစ်အမျိုးသမီးအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးသို့မဟုတ်အချို့သောပျော်စရာဖြစ်ကျေးဇူးပြုတွက်။ ရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အပေါ်ကြော်ငြာမူး။ မင်္ဂလာပါနှုတ်အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ကရေရှည်မေတ္တာကိုဆက်ဆံရေးနိုင်သည့်အချက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။၊ချင်တယ်။ ငါမျိုးရင်းမှန်ရပ္ဆိုအချစ်နဲ့အသည်းအသန်နှင့်လိမ္မာပါးနပ်သည်။ ကၽြန္ေတာ္ကစားဖူး။ ကျနော်ရှာတွေ့ချင်ကောင်းဝေမျှဖို့အသက်ပျော်ရွှင်စွာ။ တိုင်းခဲ့သည်မှတဆင့်အများကြီးအသက်တာ၌အထူးသဖြင့်အခါသင်အဟောင်းတွေဆိုတော့။ ငါသည်ငါ၏အပေါ်အလယ့်နှင့်ရှာဖွေနေအဘို့အတစ်လျောက်ပတ်သောယောက်ျားရ ။
ခွင့်ပြုလူမှုရေးမက္ကစီကိုလုပ်ငန်းစဉ်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု။ ကျွန်တော်မထင်မိပါဘူးလိုအပ်ဤအတွက်ချိန်းတွေ့။ ကကြိုးခုန်ဖို့ကအသင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုပေးစေခြင်းငှါအပြည့်အဝထိန်းချုပ်၏ဖုန်းနံပါတ်၊ဤသည်အလွန်အေးမြအက္ပ္ကို၊ငါဒီအက္ပ္ကို၊မိန်းကလေးတစ်ဦးထံမှမက္ကဆီကိုနှင့်မိန်းကလေးများမှလာမယ့်။ သင်ပြောနိုင်ချာ-မ္ႏခဲ့သည်မှာနာရီပေါင်းများစွာအဘို့နှင့်ဆိုကဒီလို။ ပုံနှိပ်ဒီအက္ပ္ကိုအလွန်ကြီးစွာသောပျော်စရာပါပဲ။ ဤသည်ကြီးစွာသောအိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ။ များလွန်းပူပြင်းဟိုအဟဲလိုပြော။ ငါပို့တဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစကားသို့မဟုတ်မည္အားလုံးအဖွဲ့ဝင်များအနီးအနာဂတ်။
ချိန်းတွေ့၏မြို့အတွက် ။ ချိန်းတွေ့၏မြို့အတွက် ။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှမက္ကသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်အလွန်အလေးအနက်ကစတင်ပြီးအဓိပ္ပါယ်နှင့်မေတ္တာပါဆက်ဆံရေးနှင့်အတူတစ်ဦးသစ္စာရှိအဖော်။ တစ်ခုတည်းမက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးများကိုမိသားစုအတြက္ဦးနှင့်ချစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်း၏ခံစားချက်တန်ဖိုးထားကြသည်။ နှင့်အညီ၊သင်တန်း၊အဲဒီတစ်စုံတစ်ခုကိုသဘောပေါက်။ မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးအဖြစ်သေးငယ်နှင့်အတူမွာင္ၿအသားနဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ဆံပင်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်မည်ပါးလွှာသို့မဟုတ်အနည်းငယ်ကျိကျိ။ ခေတ်မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးဂရုစိုက်ကြည့်ဖို့သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ဣတ္။ သူတို့ထဲကအများစုဟာတ္မိတ်ကပ်၊ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှင့်ရောင်စုံနှင့်ဖက်ရှင်အဝတ်။ မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးများကိုသင်ပေးခံရဖို့အငြိမ်းအေးနှင့်သိမ်မွေ့၊ဒါပေမဲ့သူတို့ထုတ်ဖေါ်သိသိသာသာအမူနှင့်စိတ်ခံစားမှု။ ကဆက်ဆံရေးကိုကြွလာသောအခါ၊မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးတွေကအရမ်းနူးညံ့ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့။ အရေးပါမိသားစု၏မက္ကဆီကန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်၏မိခင်တာဝန်များမှာအဓိကမှာ အသက်တာ၏တစ်မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီး။ သူတို့ကအစအလွန်သစ္စာနှင့်ပျော်ရွှင်ဖို့အိမျတျောကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်။ ဇနီးတစ်ဦးအဖြစ်၊တစ်မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးပေးလိမ့်မည်မိသားစုအတူမေတ္တာ၊ချစ်ခင်စုံမက်နှင့်အတူနိုင်တဲ့အရသာအဘို့အ။ မက္ကစီကို၊တရားဝင်အမေရိကတိုက်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ၏မြောက်အမေရိက။ ထိုသို့နယ်နိမိတ်အမေရိကတိုက်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဂွာတီမာလာ။ လူဦးေရ၏၊မက္ကစီကိုဖုံးအုပ်နှစ်ခုနီးပါးသန်းကီလိုမီတာ(ထက်ပို။၂)၊တစ်ဦးထက်ပိုပါတယ်လူဦးရေသန်း။ ယင်းမြို့တော်သည်မက္ကစီကိုစီးတီး။ နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဟစ်စပန်းနစ်လူဦးရေအတွက်ကမ္ဘာ့အလုနီးပါးသုံးပုံတစ်ပုံအားလုံးဇာတိစပိန်ပီ။ ခရီးမက္ကသူယောင်။ မက္ကစီကို၊၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊၊၊၊၊မက္ကဆီကို၊၊၊၊၊၊၊၊မက္ကစီကိုစီးတီး၊ဆန်းလူးဝစ် í၊၊ယွန်၊၊၊ဟောင် ၊၊၊၊၊၊ပြည်နယ်၏မက္ကစီကို၊ စာမဲန်၊ ၊၊နှောင်၊ ၊အုပ်ယွန်၊၊၊၊၊၊၊၊ó၊၊ႏ၊၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊၊အုပ် ၊၊၊ျဖန် ၊ကိပ် ၊ ၊၊၊ႏ၊၊၊ျပာင္းလဲေတယ္။
မက္ကဆီကိုသည်ပြည်နယ်၏မြောက်အမေရိကနယ်နိမိတ်ကိုအမြောက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကအမေရိကန်အရှေ့တောင်ကလီဇ်နှင့်ဂွာတီမာလာနိုင်ငံ၊အနောက်ဘက်ကကယ်လီဖိုးနီးယားပင်လယ်ကွေ့နှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၊အရှေ့ဘက်မှအားဖြင့်မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့နှင့်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်။ တွင်တည်ရှိပြီးမြောက်အမေရိက၊မက္ကဆီကိုသည်အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းရဲ့ဗဟိုအမေရိက။ မက္ကထုတ်လုပ်နေရေနံ၊သဘာဝဓာတ်ငွေ့(အဓိကအရာဝတ္ထုအတွက်လက်တင်အမေရိက)၊သံရိုင်း၊အန့်၊အစိမ်း၊အချိုရည်၊သကြားလုံးနှင့်။ အဆိုပါမိုးရွာသွန်းမှုအဆင့်သုံးရာခြောက်ရာမီတစ်နှစ်လျှင်။ အတွက်အများဆုံးမြို့၏တောင်ဘက်ကုန်းအပါအဝင်မက္ကစီကိုစီးတီးနှင့် ၊ပျမ်းမျှမိုးရွာသွန်းမှုနှုန်းသည်ခြောက်ရာမီလီမီတစ်နှစ်လျှင်။ အပူချိန်အသိုင်းမြောက်ဘက်တွင်-အပြိုင်ဒေသကနေလာနေကြပါတယ်အတွက်နှစ်ဦးအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွက်နွေရာသီစဉ်အပေါ်အမည်းကမ်း၊အပူချိန်ကအဆက်မပြတ်နှင့်အောက်တွင်မကျပါဘူး ၂၀ ဒီဂရီဆဲလ္ဆီးယပ္။
သင်မိဘတစ်ဦးဖြစ်မကြာ၏ကလေးမိန်းကလေး? ထိုအခါ၊သင်တွေး၏အချို့ကယ့်ကိုအအေးခံပြီးလူကြိုက်များယားမိန်းကလေးအမည်များသည်ဖို့ခစျြလိမျ့မညျကြောင်းအမည်သင့်ကလေးနှင့်အတူ။ တစ်ကောင်အပေါ်ဆုံးဖြတ်မည်အတော်လေးရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်အဖြစ်သင်ရှိသည်လိမ့်မည်အများကြီးကိုအကြိုက်ဆုံးပေါ့။ သင်ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်အကောင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးနာမကိုအရာသာအသံ အေးဒါပေမယ့်လည်းလှပသောအနက်အဓိပ္ပာယ်။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးအမည်များကိုရီးယားမိန်းကလေးများ။ ဒါကြောင့်ကအလွန်အေးမြအမည်ယေဘုယျအားပေးပြီးမှမိန်းကလေးများနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောသတ္တိ။ ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်သည်နိစ္စထာဝသို့မဟုတ်သတ္တိ။ ဒါဟာအလွန်ထူးခြားလှအမည်ပေးတော်မူသောကိုရီးယားမိန်းကလေးများ။ ရှားပါးသောသော်လည်း၊ဤအမည်များအလွန်ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အလွန်အဆင်းလှသောအနက်အဓိပ္ပာယ်။ - ဆိုလိုယဉ်ကျောက်မျက်အရာသာကြည့်ကောင်းပေမယ့်လည်းအဖိုးတန်။ မိန်းကလေးငယ်များမကြာခဏနှိုင်းယှဉ်လျှင်ပွင့်အဖြစ်သူတို့အဆင်းလှဖြစ်ကြပြီးဆောင်အရောင်အဝါနှင့်ပျော်ရွှင်မှု၏အသက်တာမှ။ ထို့ကြောင့်၊-လူငယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးလှပလူကြိုက်များယားမိန်းကလေးအမည်များ။ ၏အဓိပ္ပါယ်သည်လှပသောပန်းပွင့်'။ အခြားလှပတင့်တယ်သောနာမတော်အကြောင်းသင်ပေးနိုင်ဖို့သင်၏ကလေးမိန်းကလေးသည်ကျဆင်း။ ဒါဟာတစ်ဦးအလွန်အဆင်းလှသောအမည်ကိုဆိုလိုသောရတနာ။ တစ်ဦးကမိန်းကလေးသည်အဖိုးတန်အပိုင်တွက်မိဘများနှင့်အရှင်ဤမည်နိုင်အဖြစ်စံပြ။ ဒါကြောင့်လည်းနောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်သောအမှန်တရားဖြစ်'။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အင်အားအရှိဆုံးအမည်များကိုပေးအပ်ရန်ကိုရီးယား မိန်းကလေးများ။ ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်သည်ဖြောင့်မတ်မိန်းကလေးတစ်ဦး'။ အီး။ သူတစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်အစဉ်အမြဲတရားမှန်နှင့်အပြစ်လွတ်။ ဤသည်အမှန်ပင်အလွန်တင့်တယ်သောအမည်အတော်လေးလူကြိုက်များလွန်း။ ထားသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးအမည်များကိုရီးယားမိန်းကလေးများ။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အများအပြားလူသိများမျက်နှာများနှင့်အတူဤမည်။ ဒါဟာအခြားအစွမ်းထက်သောအမည်အဓိပ္ပါယ်ယုတ်'။ အီး။ တစ်ဦးကမိန်းကလေးခဲ့သူထွက်သို့မဟုတ်ရုပ်ဖြစ်လာမှမည်သည့်အခြေအနေ။ ဤသည်ကြီးစွာသောအမည်နိုငျသောလက်ဆောင်ကိုသင်၏ကလေးမိန်းကလေး။ ဟာအလွန်လှပပြီးအမွှေးအမည်၊ဒါပေမယ့်အဓိပ္ပါယ်ကို၏နာမတော်သည်ခိုင်ခံ့သော'။ ဒါကြောင့်၊ဤအမည်ကိုဖော်ပြထားတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်တော်တော်ဒါပေမယ့်အားကြီးသောအခါအလိုအပ်နေပါသည်။ ဤသည်ကြီးစွာသောအမည်ကိုဖော်ပြရန်နိုငျလုံးအကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏။ ဤအမည်သည်အလွန်ရေပန်းစားနာမည်နှင့်မိဘမေတ္တာအမည်ကိုမိမိတို့အကလေးငယ်ကိုမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူဤ။ ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်သည်လှပသောမိန်းကလေး'။ ဒါကြောင့်၊သင်ခံစားရလျှင်သင်၏ကလေးသည်အဆုံးနှင့်အလှဆုံးမိန်းကလေးတော့မည်သူမ၏နှင့်အတူဤ။ အခြားလူကြိုက်များနာမည်ကိုရီးယားဟာမိ-အိုကေ။ အဓိပ္ပါယ်ကဒီ၏နာမတော်သည် လှပသောပုလဲ'။ သင်လက်ဆောင်ဤအမည်ကို၏လှပသောမိန်းကလေးငယ်သောသူအမှန်ပင်အဖိုးတန်သည်။ မိန်းကလေးများအဖို့ရည်ရွယ်နေကြပါတယ်၊တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအပိုင်အတွက်တိုင်း၏မိဘများ။ သူတို့ကလာနဲ့အလှဆင်ထိကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအဘို့ထိုသူတို့။ သင်ခံစားရလျှင်သင်အဘို့အအတူတူသင့်ရဲ့ကလေးမိန်းကလေးသို့ဖြစ်လျှင်ဤသည်စုံလင်သော။ အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်ကို၏အရောင်အဝါ'။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးအသေးလှယားမိန်းကလေးအမည်များ။ အဓိပ္ပါယ်ကဒီ၏နာမတော်သည်အစဉ်အမြဲ'။ အီး။ အဘယ်သူမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုထွက်ခွာနိုင်၊အမှတ်အသားတစ်ခုဟာစိတ်ထဲမှာလူအများအစဉ်အမြဲ။ ဒါကြောင့်၊ဤသည်အလွန်နာမည်ကရှေးခယျြဖို့သင်တို့အဘို့အကလေးငယ်မိန်းကလေး။ ဤသည်အခြားလူကြိုက်များနာမည်များအတွက်မိန်းကလေးများ၏။ ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်သည်အသက်တာရှည်'။ လူတွေကမကြာခဏစဉ်းစားပေးခြင်းဤအမည်ကိုမှမိမိတို့ကလေးအဖြစ်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြပါပြီအသက်တာရှည်။ ဤအသံသည္ထြက္၊ဒါပေမယ့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်။ သည်လူကြိုက်များသောအတွက်အသုံးပြုရီးယားအဖြစ်အမည်တစ်ခုအတွက်မိန်းကလေးများ။ ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်သည်စင်ကြယ်သော'။ ဤသည်အလွန်အဆင်းလှခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအဘို့အမည်ကိုသင့်ရဲ့ကလေးမိန်းကလေး။ နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအမည်နိုင် ရွေးချယ်သည်သင့်ရဲ့မိန်းကလေးအငှား။ ဒါဟာအတော်လေးလူကြိုက်များအမည်ကိုအကြားကိုရီးယားမိန်းကလေးများ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်အဆင်းလှသောအရာဝင်အတူအပြည့်အဝဆွဲဆောင်မှုနှင့်အလှအပ၏။ အဓိပ္ပါယ် '။ ဤသည်အခြားအေးမြနှင့်လူကြိုက်များအမည်ကိုအတွက်မိန်းကလေးများ၏။ အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်ကို၏အတိုး'။ အီး။ သူတစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်အတိုင်းကြီးထွားလာချိန်နှင့်ရရှိတဲ့ကြီးမားမည်။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အဆိုပါငှက်အမည်များတနိုင်ရှိသမျှပေးဖို့သူတို့ရဲ့ကလေးမိန်းကလေး။ ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်သည်မေတ္တာသမီး'။ အီး။ သင့်ရဲ့မိန်းကလေးဟာအလွန်ချစ်နှင့်မင်းသ။ ဒီနာမည်ဟာလည်းအတော်လေးအကြားရေပန်းစားကိုရီးယားမိန်းကလေးများ။ ဤအမည်ကိုပေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပန်းပွင့်ဖို့၊တောက်ပသောနဲ့လှပတဲ့။ အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်ကို၏အရှောက်နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အအိပ္နဲနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးမိန်းကလေးအတွက်အမည်များကိုရီးယား။ စဉ်းစားလျှင်သင်၏မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးအဖြစ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနဲ့လှပတဲ့ပန်းပွင့်ကဲ့သို့သောကြာ၊ထို့နောက်ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးအမည်များ။ ယုန္ျသို့မဟုတ်ကြာပွင့်'ဟူသောတစ်ဦးအလွန်လူကြိုက်များအမည်ကိုနှင့်အတူလှပသောအနက်အဓိပ္ပာယ်။ ခ်င္း-နေရောင်အလွန်လှပသောနာမတော်အဘို့အကိုရီးယားမိန်းကလေး။ အမည်ကိုကအတော်လေးရေပန်းစားနှင့်အလွန်အဆင်းလှသောအဓိပ္ပာယ် ။ အီး။ အမှန်တရားနှင့်ကောင်းမြတ်ခြင်း။ ဤအမည်သည်အလွန်ရေပန်းစားနှင့်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်အမည်များလွန်း။ လသည်လည်းအလွန်လူကြိုက်များအမည်ကိုအကြားကိုရီးယားမိန်းကလေးများ။ ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်သည်သင်ယူ'။ အီး။ နှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦးကြီး၏အသိပညာ။ ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်သည်ငွေ'။ အီး။ အဘယ်သူတစ်ဦးအဖြစ်အဖြူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်၏။ ဤသည်ကိုလည်းတစ်ဦးလူကြိုက်များအမည်ကိုအကြောင်းသင်ပေးနိုင်ဖို့သင်၏ကလေးမိန်းကလေး။ ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်သည်ယဉ်ဥယျာဉ်'။ အီး။ သူတစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသည်လှပပြီးအယဉ်တစ်ခုအဖြစ်ဥယျာဉ်အပြည့်အဝလှပသောပန်းပွင့်။ ဒီဟာအလွန်ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်လူကြိုက်များနာမည်ကရှေးခယျြနိုငျသင်တို့အဘို့အမိန်းကလေး။ ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်အကြိုက်ဆုံးကိုရီးယားမိန်းကလေးအမည်များ။ အဓိပ္ပါယ်ကိုဤအမည်ကို၏ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်'။ အီး။ တစ်ဦးကမိန်းကလေးနှင့်အတူအလွန်သဘောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုသဘောထားနှင့်။ အမည်ရှင်သည်လည်းအတော်လေးလူကြိုက်များ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်အားကြီးသောအဓိပ္ပာယ်သောယုံကြည်ချက်'။ ဤယုံကြည်ချက်နိုင်မည်အကြောင်းတစုံတခုကိုမျှ အဓိကအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားယုံကြည်ချက်အပေါ်ဘုရားသ။ ပြီးခဲ့သည့်ဒါပေမယ့်လည်းလူကြိုက်များနာမည်ကိုရီးယားမိန်းကလေးများသည် ။ ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဤတောက်ပကြည်'။ အီး။ တစ်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးအရမ်းပြောင်လက်တောက်ပနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလားအလာနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ ဒါကြောင့်၊ဤထိပ်တန်းရှိပါတယ်လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့လှပတဲ့ကိုရီးယားမိန်းကလေးနာမည်ကနေရှေးခယျြနိုငျ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အမည်များရှိသည်တိကျတဲ့နှင့်အလှအဓိပ္ပာယ်နိုင်မှဆက်စပ်သင့်ရဲ့မိန်းကလေးငယ်။
၁။ တစ်ဦးကကြီးမားသောသုံးစွဲသူများ၏နံပါတ်အဆိုဒ်အတွက်မှတ်ပုံတင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်များ၏တစ်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရာ:အသွယ်လူငယ်အမျိုးသမီးနှင့်၏ပိုင်ရှင်များအပူတပြင်းပုံစံများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးသမီး၊သူအမျိုးသမီးအလုပ်အိမ်မှာအချစ်ပင်သဘာဝနှင့်စည္။ သင်နိုင်အောင်သူငယ်ချင်းများ၊နှင့်လည်းဆွဲဆောင်မှုမှတရုတ်အမျိုးသမီး။ ၂။ အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်။ အပြားအားဖြင့်မြန်မာဘာသာ:အမြင့်၊အလေးချိန်၊စိတ်ထားနှင့်ဇာတ်ကောင်စရိုက်များ၊ဂီတနှင့်စာပေအရသာ၊ဝါသနာ။ သင်အလွယ်တကူရွေးချယ်အသင့်လျော်ဆုံးစံသတ်မှတ်။ ၃။ ။ သုံးစွဲသူအများအပြားတွေ့အကြုံကောင်းရှိသည်နှင့်အတူ။ ကျွန်မပြောပြမယ်လူတွေအများကြီး။ ကျွန်တော်ဟာအထီးကျန်၊ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းအားကြီးသော။ ကြီးကြီးမျှော်၊နွေးထွေးနံရံ၌လည်ဆွဲနှင့်အတူတောင်များ၊သဲကန္တာရများ၊တောရိုင်းဒန်၊အေးအေးဆေးဆေးမြစ်ချောင်းများ-အများဆုံးမြှုပ်နှံလူနာတွေဝိုင်းအားဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်။ သဘာဝမတူကွဲပြားမှု။ တစ်ခုခုရှိပါတယ်ကပြောပါတယ်ခံရဖို့အကြောင်း"ဘာသာပြန်ဆိုမဟာမိတ်နှင့်ဘာသာပြန်ဆိုလွ"။ ဘာလဲ"ဘာသာပြန်ဆိုလွအ"အ၊အက်ိဳး၊တူမိန်းကလေးများ။ -ဒီဆိုဒ်အဖြစ်အစစ်အမှန်နှင့်တွေ့ဆုံတရုတ်အမျိုးသမီး။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ဖြစ်ပါသည်။ အားေလောကကိုဖွင့်ဖို့အဆင်ပြေဝန်ဆောင်မှုတံခါးကိုဖွင့်လှစ်"မွအသက်အရွယ်မိန်းကလေးများမှတရုတ်ဆိုဒ္လိပ္စာ"၊၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းများအတွက်အချစ်၏။
ယေဘုယျအနေဖြင့်၊တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအချိုးအစားများနေသောလူမျိုး၏တစ်ဦးရောနှောအိန္ဒိယနှင့်တောင်ပိုင်းဥရောပ၊အလတ်စား-အလင်းအမှောင်အရေပြားကို၊အလွယ်တကူမွာင္ၿ၊ကြီးများ(သို့မဟုတ်အဆီ-ခံရသညျ့)အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်၊မျက်လုံးနှင့်ဆံပင်ပျှမ်းမျှအမြင့်(တိုတောင်းထက်အမြောက်ပိုင်းဥရောပ၊ဒါပေမယ့်မအဖြစ်တိုတိုအဖြစ်မှိုင်း၏အာရှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး)၊နှင့်ကောင်းတစ်ပုံ။ အီဂို၊တစ်ဦးကကျော်ကြားသောအမေရိကန်လိပ္စာမ်ား-၊အနီးကပ်ကို"ရိုးရာဖး"အလှအပအတွက်မက္ကစီကို၊နှင့်ဖြစ်နိုင်ဤသည်မိန်းကလေးအမျိုးအစားသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အများဆုံး။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ႏတိုင္းရင္းသား(တကယ်တော့၊ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးကမ္ဘာ့သမိုင်းရောနှောအတွက်ကမ္ဘာ့)ထို့ကြောင့်မမှိုင်း။ ဒါကြောင့်၊ဥပမာအားဖြင့်၊အီထက္အမကိုအတိအကျမက္ကနေစဉ်၊ အႏုသည်:ဖက်ရှင်ဒါသည်လက်ဘနွန်နွယ်ဖွားနှင့်များစွာသောအခြားလူများ၏အခြားလူမျိုးသည်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း"တစ်ခုတည်း"ကနေကြည့်မက္ကဆီကန်မိန်းကလေး။
အသစ်အကျွမ်း။ ဒါဟာဒရိုင်ရယ်၊အထူးသဖြင့်လျှင်၊ဤအမှုကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်ရှာဖွေရေး၏အသီးအသီးအခြား။ ငါရှင်းပြပါလိမ့်မယ်၊ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်။"စတင်စကားပြောရန်"ခလုတ်ကို၊သငျသညျသစ်တစ်ခုကိုလူတစ်ဦး။ လိုသင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို
ပြီးနောက်၊သငျသညျအမိန့်တင်ထား၊သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်အတည်ပြုအီးမေးလ်ကနေကျွန်တော်တို့ကို။ အခါသူတို့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုအ၊သင်၏အမည်ဝှက်သည်လုံးဝပျက်စီးသည်။ ဒါကြောင့်အလွန်ဆွဲဆောင်မှု။ ရှိနေသောသူကိုပင်ယောက်ျားတွေ၏အိပ်မက်ခံရတဲ့ကလေးမလေးအခါတစ်စုံတစ်ယောက်ကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့အလွန်ဖြစ်ဖို့ရှေးခယျြ၊ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်အ၊ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ နှင့်နိုင်ဘူးသောသူတို့အမြန်ကိုယ်အလှအကြောင်း လင်းကျော်လွှားရန်။ ဤဖြစ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူး၊အနည်းဆုံးမဟုတ်။ ဂန္ထဝင်ဗားရှင်း။ မဟုတ်တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးပြေးလွတ်မြောက်။ အားဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်သင့်ရဲ့ထောက်လှမ်းရေး၊အထူးကြံအစည်၊စကားသည်၊နှင့်အရာအားလုံးထက်သင်ဂရုစိုက်။ တစ်ဦးရှိပါတယ်ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြသောအရာဝတ္ထုဖြစ်နိုငျသောဓါတ်ပုံ။ တစ်ဦးလည်းရှိပါတယ်ကင္မရာသောပေးပို့နိုင်ပါတယ်နှင့်သင်ဓါတ်ပုံတွေကိုယူ။ ဤသည်အကာအတုဓာတ်ပုံများ။ အဲရဲ့အရွှေရောင်နှင့်အတူစစ်မှန်သောဝ ဆက်သွယ်ရေး။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေပြီးသင့်အသက်တာကိုပြောင်းလဲ။.
မက္ကစီကိုနိုင်ငံ၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးမြောက်အမေရိကတိုက်၊ပစိဖိတ်နှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ။ ထိုသို့နယ်နိမိတ်အမေရိကတိုက်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြောက်ကိုရီးယားမှ။ မှအနောက်တောင်ဘက်နှင့်အတူပြည်ထောင်စု၏ဘေလီဇ်နှင့်ဂွာ။ တရားဝင်နာမည်များ၏ပြည်နယ်၏ပြည်နယ်။ မက္ကဆီကိုရဲ့လူဦးရေပေါင်းသန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေကကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့၊အသက်ရှင်သောအတွက်အမြို့မြို့။ အဓိကဘာသာစကား၏နိုင်ငံသည်စပိန်။ မြို့တော်မက္ကဆီကို- တစ်ခုအံ့သြဖွယ်မြို့တော်မက္ကဆီကိုနှင့်အတူလူဦးရေမှာကိုးသန်း။ မြို့သားတို့၏နိုင်ငံအများအားဖြင့်ကက်၊ဒါပေမဲ့အဲဒီစစ်တပ်ခ်၊နှင့်ပင်ဒေါက်(လူမျိုး၏ထောင်ပေါင်းများစွာ)မက္ကစီကိုအတွက်။ ထိုမြေပုံပေါ်တွင်မက္ကဆီကို၊သင်တွေ့လိမ့်မည်အများအပြားအံ့သြဖွယ်နေရာများနှင့်နေရာ။ မာယာရှေးဟောင်းဆိုဒ်များ၊ပြတိုက်၊သမိုင်းဝင်မြို့ကြီး၊ဒဏ္ဍာရီမီးတောင်များနှင့်တောင်၊မြစ်ချောင်းနှင့်ရေကန်များ၊သဲကန္တာရများ၊ကမ်းခြေများနှင့်နာမည်ကျော်ကျွန်း။ အကျော်ကြားဆုံးခရီးဒေသများ၏မက္ကကြသည် ၊ယာလှည့်ဖျား၏အ ကျွန်းဆွယ်၊၊အနောက်ဘက်ကမ်းအပေါ်၊အဆိုပါ၏မြို့တော်မက္ကဆီကိုနှင့်အညီ၊သင်တန်း၊အပေါင်းမြောက်မြားစွာဆိုဒ်များ၏ ။ အပေါ်ဖတ်ရန်၊ကျနော်တို့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရပ်ထက်မက္ကစီကိုအသွင်ပြောင်းမည်ကိုသင့်အသိပညာ၏ဤစိတ်ကူး။တစ်မက္ကပရဒိသုအပန်းဖြေ။လှပသောသဘာဝလှပသောကမ်းခြေနှင့်ကွဲပြားသောရှုခင်းများ၊နှင့်ထူးခြားသောသမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတွင်မက္ကဆီကိုဆွဲဆောင်သန်းပေါင်းများစွာ၏ခရီးသွားဧည့်ဤတိုင်းပြည်နှစ်တိုင်း။ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်တစ်ခုကမ်းခြေအားလပ်ရက်မှာအပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဗတ္တိသင်ကိုယ်တိုင်အတွက်သမိုင်း ယာအဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏တဦးတည်းအများအပြားလေ့လာရေး။ မက္ကစီကိုရှိအကြီးကလပ်အသင်းနှင့်သဘာ။ နာမည်ကြီးဥယျာဉ်၏ ကအမြဲတမ်းရှိပါတယ်တစ်ခုအစွန်းရောက်ပျက်။ ဒါပေမယ့်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးနဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ဗတ္တိကိုယ့်ကိုယ်ကိုကမ္ဘာ၌အချစ်ညနေခင်း၊အခ်စ္ကုိနှင့်နေဝင်ဆည်းဆာကမ်းရိုးတန်းတွင်ကမ္ဘာကြီး၏ပန်းရောင်ဟိတ်။ စစ်မှန်တဲ့ခံစားချက်မက္ကစီကိုတွင်မွေးဖွားမကြာခဏနောက်ဆုံးအသက်တာ။ တစ်ဦးမင်္ဂလာဆောင်အတွက်မက္ကငါ့ကိုသတိပေးငါ၏အထူးခြားသောမေတ္တာဇာတ်လမ်းနှင့်ပာင္းလဲ။ နှင့်ရေရှည်အားလပ်ရက်မိသားစုများအတွက်ကလေးများနှင့်အတူချန်ထားမည်စိတ်ကူး၏အမှတ်တရများလက်ထက်၌သုံးစွဲဒီမှော်။.
ကိုကျွန်မပြောင်းတော့မက္ကဆီကိုအတူအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်မမက္ကဆီကိုမိတ်ဖက်၊ငါသတိထားမိ၏စုံတွဲတစ်တွဲအမှုအနှောင့်အယှက်။ အခြေအနေများ၏လူများမှတ်ချက်ဖော်ပြသိချင်စိတ်၊အခါငါဘဲခံစားရမှာဘားတိုင်သုံးအတွက်နံနက်နှင့်ဦးစားပေးသွားဖို့အိမ်စွန့်ခွာ၊ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပါတီမှာ၊ငါအဘို့အစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြရသည်။ နောက်ထပ်အံ့သြများအတွက်စားပွဲထိုးကငါထကောက်ဥပဒေကြမ်းမှာစားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဘားတန်း၊အစားခန်းတွဲဖော်ပေးချေ။ ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်လှုပ်လာမှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း။ ကျွန်မယုံကြည်စိတ်ချငါ့အတွက်အရည်အချင်းနှင့်အောင်မြင်မှု၏အစည်းအဝေးတိုင်အောင်၊ငါ့အလုပ်ရှင်၊အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊အကြှနျုပျကိုမေးလျှင်ကျွန်မခင်ပွန်းနှင့်အတူသဘောတူငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်။ ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအလုပ်ရုံးခန်းအတွင်း။ နောက်ဆုံး၊သူလည်းမေးချင်ပါတယ်သောသူ၏စောင့်ရှောက်မှုယူကျွန်မရဲ့တစ်နှစ်အရွယ်သမီးနေစဉ်အလုပ်လုပ်ခဲ့အဖြစ်၊လျှင် ပဲငါ့တာဝန်။ ငါထက်။ ငါသည်အမကြာမီသဘောပေါက်တဲ့လူအတော်များများမက္ကစီကိုအတွက်ယုံကြည်နေဆဲတွင်အစဉ်အလာကြီးဌာန၏အပြောင်းအလဲ၊ဘယ်မှာအမျိုးသားများဆောင်ပိုက်ဆံနှင့်အမျိုးသမီးအိမ်မှုဝေယျာ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊သာလေးဆယ်ငါးမျိုးသမီးများအသက်တဆယ်ခြောက်ယောက်အလုပ်ခန့်တွင်မက္ကဆီ(အိုအီးစီဒီပ်မ္းမွ်)၊ဒါပေမယ့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထက်ပိုရာခိုင်နှုန်းကလည်းအလုပ်အတွက်နေအိမ်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်မှု။ နောက်နှစ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းငါ့ခင်ပွန်း၊ငါနေဆဲရသိမ်မွေ့သည်များထံမှမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ငါ့သမီး၊ဆရာ၊ငါဖြစ်၏သောတာဝန်များအတွက်သူမ၏စွမ်းဆောင်မှုများမှာကျွန်မခင်ပွန်းရဲ့ကျောင်း၊အချိတ်ကိုချွတ်။"ခွဲခြားဆက်ဆံနှင့်အမျှများ၏မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီးများပြဿနာများနေ့စဉ်အသက်တာ၏။ အများစုကအမျိုးသမီးများကိုရှာတွေ့နိုင်ရင်အလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်ဖြစ်လာရေးကြေးရေးလွတ်လပ်သောကြောင့်အခွင့်အလမ်းကို ပဋိသန္ဓေယူ။ အချို့ကျေးလက်အသိုင်းအမျိုးသမီးများမဲပေးခွင့်မပြုသို့မဟုတ်မဲအဆိုအရသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့ဦးစားပေးပြီး၊ရှိနေပါသေးသည်မိန်းကလေးများကိုမကျောင်းသို့သွားလို့သူတို့တွေဟာအမျိုးသမီး။ အကြမ်းဖက်မှုလည်းတစ်ခုအလေးအနက်ပြဿနာ၏ဘဝအသက်တာ၌မက္ကဆီကန်အမျိုးသမီး။ အဆိုအရအမျိုးသားတက္ကသိုလ်စာရင်းအင်းနှင့်ပထဝီ၊ထက်ပိုယ့်ငါးနှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးများကိုခံစားခဲ့ကြရသည်မှာအနည်းဆုံးတစ်အပိုင်းများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊စီးပွားရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မက္ကစီကိုစီးတီးအမည်ရှိသောဒုတိယအများဆုံးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးအကြားတဆယ်ငါးအကြီးဆုံးမြို့လောကအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှဆယ်ကိုးနှစ်အရွယ်။ ရှောင်ရှားရန်သို့မဟုတ်အဖြစ်နိုင်ချေ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်အများပြည်သူနေရာများ၌၊ငါသည်ငါ့ဘောင်းဘီများ၊အဝတ်၊ဆင်မြန်း၊ရှပ်ကွဲ၊နှင့်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာအကြောင်းလေးမျိုးသမီးသူရွေးချယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ရန်တို့လျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်။ ငါနားလည်ကြောင်းဒါကြောင့်ငါ့အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့အပေါ်စီး အတက္ကစီဖြစ်ပါသည်၊ဒါကြောင့်အခါတိုင်းလိုအပ်ယူနနံနက်ယံ၌စောစောပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ညဉ့်အချိန်တွင်၊ငါရွေးချယ်ရေးက်။ ဒီပေးသည်ပေးပို့ဖို့နိုင်စွမ်းအကြှနျုပျ၏မိတ်ဖက်၊သူကလိုက်နာနိုင်ငါ့အလှုပ်ရှားမှု၊အဆင့်အားဖြင့်အဆင့်မှီတိုင်အောင်၊ငါသည်ရောက်ရှိငါ့ခရီး။ အပေါင်းတို့၏အဆိုးဆုံး၊အမျိုးသမီးများတာဝန်ရှိသည်အပြစ်များသောသူတို့သည်ဖြစ်ကြ၏။ အခါမာရ်နတ် ၊တနှစ်ကျောင်းသား၊ပျောက်ကွယ်သွားပြီးနောက်စုႏွမွ ၊ မွတ္ခ်က္မ်ားလွှမ်းလူမှုမီဒီယာ၊ေအာက္လႈပ္ရွားသူမရှိခြင်း၏ပျော်စရာ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကခုန်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏၊ဖြစ်ခြင်းနှောင်းပိုင်းတွင်အရက်ဆိုင်များ၊စွပ်မူးနဲ့ကားမောင်းနေအိမ်တည်းဟူသော၊လူတို့ယုံကြည်ရန်ဦးဆောင်သူမ၏ပျောက်ဆုံးပြီးလူသတ်မှု။ နေသော်လည်းအ ပည္နယ္၏ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများအတွက်၊မက္ကစီအစဉ်နှင့်အစီအမံများမှာခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ကာကွယ်တားဆီးအကြမ်းဖက်မှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်။ အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးအတွက် နှင့်အခြားအဓိကမြို့ကြီးများအတွက်မက္ကစီကိုရှိအကောင်အထည်ဖော်မြောက်မြားစွာဖြေရှင်းချက်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အမျိုးသမီး-သာရထားမာ္ေတာ္ကားမ်ား၊သီးခြားစောင့်ဒေသများမှာမြေအောက်ဘူတာရုံများ၊နှင့်အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုအပေါ်ခလုတ်အလုပ်များလမ်း။ လည်းရှိပါတယ်ပန္းဘတ်စ်ကားကြောင်းအကြံပြုထောက်ခံကြပါဘူး၊ပြီးကျင်းပပြန်၊ပုဂ္ဂလိကတက္ကသာမိန်းမတို့အဘို့။ စဉ်တွင်အချို့သောအမြင်ဤအခင်းအတိုင်းအဖြစ်လုံလောက်သောနှင့် ၊အမျိုးသမီးများစွာမရှိတော့လုံခြုံစိတ်ချမှုကိုအသုံးပြု။ အစရှိသဖြစ်ပါပြီတိုးတက်မှုအတွက်တချို့ဒေသခံအသိုင်းအထူးသျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊သောသူတို့တွင်အအန္တရာယ်အရှိဆုံး။ ဒေသခံအမျိုးသမီးများခံစားခဲ့ရဆခွဲခြားဆက်ဆံသောကြောင့်၊သူတို့အနေ၊ဆင်းရဲသူနှင့်အမျိုးသမီးနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးနှုန်းထားများ၏မမိခင်သေဆုံးမှု၊အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အစွန်းရောက်ဆင်းရဲမွဲတေမှု။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အမျိုးသမီးများတိုက်သို့အုပ်စုများ ဖန်တီးရန်နှင့်ရောင်းဖို့အကျင့်ကိုကျင့်၏အနုပညာအမျှကုန်သွယ်မှုနှင့် ရယူဘဏ္ဍာရေးလွတ်လပ်ရေး။ ထို့အပြင်၊ဒေသခံအမျိုးသမီးများမကြာသေးမီအောင်မြင်စဖူးအဆင့်နိုင်ငံရေးနိဗ္ဗာန်၊ပိုပြီးသူတို့ကိုပိုပြီးတက်ကြွစွာပါဝင်တွက်ဒေသခံရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်မိႈ။ ဒီနှစ်၊ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အတွက်သမိုင်းတွင်မက္ကဆီကို၊အမျိုးသမီးပြေးသည်။ ပေမယ့်ကိုယ်ဝန်အတွက်မက္ကဆီကိုတားမြစ်သည်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အပြစ်ရှိကြောင်းအဖွဲ့အစည်းအကူအညီအမျိုးသမီးကို၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဖြစ်စေ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အသွားလာရန်မက္ကစီကိုစီးတီး၊ဘယ်မှာမှသာနေရာဆန္ဒအလျောက် ခွင့်ပြု၊သို့မဟုတ်အားပေးဆေးဝါးနှင့်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်း။ တစ်မက္ကဆီကန်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်-အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းကိုမြှင့်တင်ကာကွယ်မျိုးသမီးများ၏မျိုးဆက်ပွားအခြင့္အေ။ ဒါဟာအစကူညီပေးသည်အမျိုးသမီးအတွင်းဥပဒေရေးရာတိုက်ပွဲအတွက်ဖြစ်ရပ်များ၏ေျပာပါတယ္။ သည်လူငယ်အလုပ်သမားသမဂ္ဂသည်အတွက်တိုက်ပွဲ တိုးတက်အောင်ဆိုးရွားအလုပ်လုပ်ကိုင်အခြေအနေ၏နှစ်ယောက်ထက်ပိုသန်းပည္တြင္းအလုပ္သမားမ်ား။ အဆိုအရအမျိုးသားကောင်စီ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ၊ပြည်တွင်းအလုပ်သမားများတို့တွင်အများဆုံးဖွဲ့စည်းပုံခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်တွင်မှဆက်ဆံရေးတွင်အုပ်စုအလုပ်ထက်ပိုအမျိုးသမီးတွေကိုလက်လှမ်းရှိသည်မဟုတ်၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများထဲကရှစ်ဆယ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလူမႈဖူ၊ငါးစတင်အလုပ်လုပ်သည်အသက်ဆယ်နှင့်ငါးယောက်။ ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအလုပ်ပိုထက်ဆယ်နှစ်နာရီတစ်နေ့လျှင်ခြောက်ရက်ပတ်လုံးတစ်ပါတ်အတွက်၊နိမ့်ဆုံးလစာ၊နှင့်မှန်မှန်မပြုလုပ်ရရှက်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုတို့အားဖြင့်သူတို့အလုပ်ရှင်များ။ အဖြစ်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ၊အထင်ရှားဆုံးတိုးတက်မှုအတွက်တိုးလာအရေအမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်ခြင်းအတွက်နိုင်ငံရေး၊ဆေး၏နိဒါန်းများမှတဆင့်အသစ်နှင့်တင်းကြပ်တမ်းလိုအပ်ညီကိုယ်စားပြုအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အဆိုပါစာရင်း၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်။ လောလောဆယ်၊၄၂၏အခန်း၏ဒုတိယမက္ကစီကို၏အမျိုးသမီးများမှာ၊နှင့်နှိုင်းယှဉ်အိုအီးစီဒီနိုင်ငံများ၏ပျမ်းမျှ အရာ ၂၈ အဘို့အနိမ့်အိမ်များအမျိုးသားဥပဒေပြု။ မက္ကဆီကိုသည်တတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံ။
တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ရန်အတွက် နှင့်အတူစတင်အမျိုးသမီးအဖို့ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါ။ ကျွန်တော်ထင်သည်လေးနက်သောရည်ရွယ်ချက်အဲဒီဆိုက်တွေအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များ၊မိခင်နှင့်ကလေးများ၊အားတစ်ခုတည်းသည်ဘိုး။ -တေပါလည္း အားဖြင့်သောင်းချီထောင်ပေါင်းများစွာ၏အမျိုးသမီး။ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်လက်တင်အမေရိကနှင့်ကာရစ်ဘီယံမှစာရင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ရန်အသေးစိတ်ရှာ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊လမ်းဖြင့်၊မလိုအပ်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမလိုအပ်။ တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်ရန်အတွက်ရုရှားနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးနိုင်သူသင့်မေးခွန်းများကိုဖြေ။ သောင်းချီတဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်တစ်ခုတည်းမိခင်နှင့်ဖခင်သည်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များ၊မိခင်နှင့်ကလေးများ၊အားတစ်ခုတည်းသည်ဘိုးယူ၊ဒီဆိုက်-ရုရှဆိုက်-အနက်။ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်လက်တင်အမေရိက-ကာရစ်ဘီယံဒေသအနေဖြင့်စာရင်းသို့မဟုတ်အသေးစိတ်အတွက်။ တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးမိန်းကလေးနှင့်အတူ။ ကမ္ဘာ၏ညီညွတ်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘာဝကိုနှစ်သက်နှင့်အတူ။ ငါ၏အအိပ်မက်ကြီးဖြစ်လာရန်တစ်ဦးဇနီးနှင့်မိခင်။ ငါဖြစ်၏သောယောက်ျားလေးတစ်ဦး၊ငါ၏ချစ်သားနှင့်ခွေး။ ချွေတာ၊တတ်၏ထံမှရယ်မောသံများ။ ကျွန်တော်ယုံကြည်သည်ရှိရှိနိုင်ကြောင်းနိုင်ဘူး။ ယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေ၊နှင့်အပြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မနာမည်က -အားလုံးအိပ်မက်ခွန်အားဖြစ်ကြ၏။ ငါအချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူ။ အိုကေ-ငါသာမန်မိန်းကလေး၊ပိုပြီးနောက်ကွာရှင်း။ ငါသည်တဆိခဲ့သည့်အ။ အဘို့အရှာနေအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးဂန္မိသားစု။ ငါချစ်လူအပေါင်းတို့သည်ငါ့အသက်ကို။ ။
အကောင်းဆုံးမိန်းကလေးငယ်များအွန်လိုင်းစုဝေးကျော် ၁၀၀၀ မိန်းကလေးများအတွက်ဗီဒီယိုချက်တင်၏၁၈၊ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တဏှာ ဘ်လိင်များအတွက်။ သင်ချင်တယ် စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တစ်မိန်းကလေးအဝတ်အစားချွတ်။ နှင့်လည်းဒီမှာလာနှင့်လက္ခဏာသက်သေဖြစ်မီးအစုံအမျိုးသမီးမော်ဒယ်ဆို၏။ ချက်တင်ကစားတဲ့မိန်းကလေးများအထိ ၁၈ မည်သည့်အချက်မှာထိုနေ့၏ချက်တင်အပေါ်ကိုထိပုတ်ပါ၊နောက်သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်တွေအများကြီး။ နှင့်ထက်လျော့နည်းအတွက် ၁၄ စက္ကန့်၊အဆိုပါကင်မရာကိုစတင်ထိတွေ့နှင့်အတူအဆိုပါမိန်းကလေးလိုသူတယ္ရွင္အားလုံးအတွက်အသင့်ရဲ့ကာမဂုဏ်စိတ်ကူး။ သင်နားလည်နိုင်ဆှအကြံအစည်၏ကမ္ဘာ့အဖိနှိပ်ဝှမ်းလုံးနှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦးအနေနဲ့နှိုးဆှ။ အဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများဗီဒီယိုချက်တင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ် နှင့် ပေါ်မှာအများကြီး၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်စောင့်ကြည့်ဖို့ၡမ်ားဂျေကမ်၊ထို့နောက်သင်ဆဲကျော် ၁၈ အသက်အနှစ်။ အေးမြသောမျက်နှာနှင့်ကောင်းတဲ့စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူရုရှားထံမှပြီးမှ၊သူတို့ကိုလူတိုင်းအသုံးပွုနိုငျလုံးဝအမည်မသိစကားပြောမပါဘဲ။ ညစ်ပတ်ပေရေလိင်များအတွက်စုံတွဲများသူအမျိုးသမီးတို့အားကောင်းသောလိမ့်မည်မေးတက်ချိန်းတွေ့အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်။
မက္ကစီကို၏ပုမေရိက၏အသက်အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးအဆင့်မြင့်လူ့ယဉ်ကျေးမှု။ တိုင်းပြည်အစား အသစ်တစ်ခုတော်လှန်ရေး။ အလူ၊လက္နက္ခဲသောထုံးတမ်းနှင့်အစဉ်အလာများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နေရာနှင့်ရှေးခေတ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊အဘယ်မှာရှိအစဉ်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသည်။ လူသန်းပေါင်းများစွာ၊လူမှုရေး၊နှင့်အသံ-အသံ၏။ ကျွန်တော်တို့သင်ယူကြ၍အချို့သောနယ်၊ကွမ်ကြောင်း၊နိုင်ငံအဖြစ်သင့်ခဲ့ကြ၏မျက်နှာကိုအတွက်အနာဂတ်၊သို့သော်၎င်း၏အမြစ်များကိုနက်ရှိုင်းသွားသို့။
၏တည်နေရာချစ်ကြည်မြေပုံနှင့်ဖော်ရွေ တိုင်းပြည်အတွက်၊ ဒေသ၊ကာဇတ္စတန္-
ဤစကားမှန်သည်မဟုတ်။ အမည်နှင့်နိတ်အရေးကြီးပါသည်။ တည်နေရာအနေနဲ့သာမန်လူတစ်ဦး၊ ဖန်တီးသောသူကျွန်ုပ်တို့၏မြေပုံ။ သင်သည်လည်းပြင်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်အချက်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်။ သင်နိုင်မည်အကြောင်း၊လိုက်နာပြီးကမ္ဘာ၏အသေးစိတ်အကြောင်း။ ဖေါ်ပြချက်၏-ဇက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ထိုမြေပုံ။ ဒီမြေပုံနှင့်အတူကမ္ဘာ၏တည်နေရာတစ်ခု။ အသေးစိတ်အချက်ရရှိမှုမရှိတော့များမှာ။ ရိုင်းအ ၈၀။၂ ကီလိုမီတာမှတောင်ဘက်။ ရှိ၏ဓါတ္ပံုပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာကိုမြင်လျှင်တန်ဖိုးရှိ။ အသေးစိတ်အချက်၊ထိုအထဲကစစ်ဆေးအလှန်မြေပုံ၏နေရာများအားကမ္ဘာအနှံ့။အရပ်နှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များဆက်ပြောသည်နေကြတယ်ပီးအသုံးပြုသူများကသူတို့ကိုယ်သူတို့။သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများ၊စသည်တို့ကို။ များမှာအကြို-ရွပ္အက်ၤ၊နှင့်နောက်ဆက်တွဲမှတ်ချက်များများမှာလည်းအကြား။ အုပ်ချုပ်ရေးအခွင့်ရှိမရှိထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ကို။ ဓာတ်ပုံအက်ဆေး၊စွန့်စားမှုခရီးစဉ်၊နှင့်အခြားဆောင်းပါးများ။ သင်စကားပြောနိုငျ။ မှတ်ချက်ပေးရန်ကျေးဇူးပြုပြီး။ အိမ်နီးချင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်တည်ရှိပြီးအခြားသူများထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမလိုအပ်ဖြစ်ပါတယ်၊သာအတူလိုက်နာမှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမိမိတို့လိုအပ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်တယ်၊နှင့်သင်ပြု။ ၏ရလဒ်အဖြစ်ပူးတွဲဖန်တီးမှု လုပ္ေသာကဆုံးဖြတ်မည်သူကပိုင်ဆိုင်တယ်၊သတင်းအချက်အလက်။ အဲ့ဒီအတွက်အသွင်သဏ္ဌာန်။.
ဒီဇာတ်လမ်းကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့မက္ကဆီကိုရုပ်သံရှိုး။ အများအပြားရှိပါတယ်သရုပ်ဆောင်များကိုရှိပါတယ်၊တစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတြိဂံ၊ဒါပေမယ့်လည်းကြီးမားတဲ့စက်ယန္တရားများ၊တစ်နိုင်ငံလုံးအ။ ဒါဟာအားလုံးစတင်ခဲ့နှင့်အတူပျောက်ဆုံးမက္ကဆီယပ်ရန်စစ္စဖျာ။ သူတို့ကကနေပျောက်ကွယ်သွားဒါပြီးနောက်အစည်းအဝေးအတွက်ဘား သာနှင့်အတူမော်စကိုတွင်၊သူတို့စောင့်ကြည့်အဆိုပါပွဲစဉ်များအတွက်ပီရူး(ဒိန္း)။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေစစ္စ မထိတွေ့အပေါ်စနေနေ့၊သူရေးသားခဲ့တဲ့မက္ကမိတ်ဆွေ၊မန္ဒါတြင္သူ၏ စာမျက်နှာ။ ကျွန်တော်သိသောမြတ်စွာဘုရားသည်အမျိုးအားဖြင့်သူမ၏ပထမဦးဆုံး။ ထိုကတည်းက၊မိမိအဖုန်းပိတ်ထားခဲ့သည့်အခါ၊ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သောဤမိန်းမ၊သူမသည်မပေးခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုမည်သည့်အဆက်အသွယ်များနှင့်ပိတ်ဆို့အဆက်အသွယ်။ ကျွန်တော်သိသောအရာတစ်ခုခုထူးဆန်းဖြစ်ပျက်သောကြောင့်၊၊နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောဖို့သူ့ကိုအရမ်းရောထွေးနှင့်ပင်ခ်ိဳေ။ ကျနော်တို့ပြီးသားသို့အသီးအသီးအခြားရုံးမှာ။ စစ္စရဲ့မိသားစုဝင်အသုံးပြုသောထောင်မှုနည်းလမ်းများရှာဖွေရန်။ သူလိုက်ဖို့မော်စကိုမိမိအနေဖြင့်မိတ်ဆွေများ၊သူကိုယ္စားရဲ။ မည်သူမဆိုလျှင်ကြားရကြောင်း၊ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေကျေးဇူးပြုပြီး။ အဆိုပါပို့စ်အမန္ဒါဖော်ပြခဲ့၏ပျောက်ဆုံးသည်အဆန်၊အနက်ရောင်ဆံပင်သည်လူသူအရောက်ဖို့ရုရှားအရူ့များအတွက်မိမိအသင်းမှာကမ္ဘာ့ဖလားပွဲအလျင်အမြန်ဖြန့်နှံ့ပါ။ သူကလက်ထပ်သည်။ ရေးသားသူတဦးလက်စ်လိုပက်ဇ်။ နှင့်သူ၏ဇနီးပထမဦးဆုံးခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက် တစ်ခုခုမှားခဲ့သောကြောင့်မစွဲပြန်၏။ ပြီးနောက်မကြာမန္ဒါထုတ်ဝေခဲ့သည်ကဤကိစ္စတွင်အတွက်၊သူတို့တက်ကြွစွာအကြောင်းရေးသားခဲ့သည်အတွက်မက္ကမီဒီယာ။ အဆိုပါသတင်းစာဆရာဆင်းခြေရာခံထောက်လှမ်းအမျိုးသမီးများအဘယ်သူအားလုံးစိတ်လှုပ်ရှားစတင်၊သူမ၏ဆောင်ခဲ့ကြ၏ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းဘာတွေဖြစ်ပျက်။ သူပြောမယ့်ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်။ တကယ်တော့ကျွန်မရှိသည်သောအပြစ်သင့်အစ်ကိုရယ်နစ်ကိုးလပ်စ။ ယူဆ၊ငါစောင့်လူငယ်တစ်ဦးသည်လူအထဲတွင်အကျဉ်းထောင်များ၊ပေးသူ့ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ခိုးယူ။ ဒါပေမယ့်ဘာမှမတူ။ အဆိုအရသူ၏ဇနီး၊သူတွေ့ဆုံစစ္စဘားတစ်ခုထဲမှာသူတို့အတွက်ကစားဒိန္း။ သူ၏မက္ကဆီကန်ညီအစ်ကိုရှိ။ နစ်ကိုးလပ်ပူဇော်သွားကြဖို့တခြားတစ်နေရာရာမှာ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ငြင်းဆန်၊ကိုသတိရပါ? ထို့နောက်သူအားငွေနှင့်စစ္စကိုရဲ့အကြွေးဝယ်ကဒ်။ ထို့ကြောင့်ရယ်ခြင်းနှင့်ငါသွားဖို့ငါ့အိမ်။ ဆန်နှင့်အတူနေရကြ၌ငါ့တိုက်ခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူ၊ဒီအကြောင်းပြောနေသူဇနီးတစ်ရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်သူကသာကိုစောင့်ရှောက်အလေးအတူတကွ။ ထိုကတည်းက၊ကျနော်တို့ဖုန်းတွင်အတူသူ့အစ်ကို၊အလပ်။ ငါသည်အဘယ်ကြောင့်မေးလျှင်၊ဆန်မသွားချင်၊ကိုသတိရပါ? ေျပာၾကားခဲ့ပါဘူး။ သူရဲ့စိုးရိမ်၊ငါစေလွှတ်မည်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုနေအိမ်တွင်တစ်ဦးတက္ကစီ။ သို့သော်၊အားလုံးကျော်မီဒီယာအရေးရင်ပိတ်ပင်ဖုန္း။ ခဲ့ပေမဲ့သူ့အစ်ကိုသူပိတ္ထားေသာအခါအကြှနျုပျသူလူငါ့ကိုရန်စစ္စကိုမေ့လျော့ခဲ့ကြောင်းအဘို့အ။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆန်ရဲ့အိမ်ထောင်သော တူသရုပ်ဆောင်။ သူေျပာတဲ့စစ္စခဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံနဲ့အသံနေစဉ်၊သူပန်ကာအစ်ကိုတောင်မဖြေချင်၏။ ငါသည်သူ့ကိုကြိုက်ပူဇော်ဖို့ၽြန္ုပ္၏တရားဝင်တောင်းပန်သူကပြောပါတယ်။ သူသည်ဟုတ်စားခ်က္ဟာတိုင်းပြည်အကြှနျုပျကိုမှရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်အကြာတွင်။ယခုရယ်တတ်သည်။သင့်ရဲ့ညီအစ်ကိုတစ်ဦးတက္ကစီယူ။ ငါသေချာပါတယ်သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ အချက်အလက်ဆန် ခဲ့တွေ့ခဲ့တာလည်းအတည်ပြုမှာမက္ကဆီကိုသံရုံးကရုရှားအတွက်၊အပေါ်တွစ်တာစာမျက်နှာ။ အသံရုံးဝန်ထမ်းရီးအတွက်ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေး၊နှင့်အဖတ်အတွက်မည္။ ဒါကဘယ်လောက်သူကအခုအောက်မှာမေးခွန်းအတွက်သူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအသက်တာ။.
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံဖြစ်ရပ်များအတွက်ကာရစ်ဘီယံ၊သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံမည်သို့သူတို့အလုပ်လုပ်၊အဌားအိမ္ရာ၊ယင္းအကူအညီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနှင့်အတူနေထိုင်သူများ၏မြို့တော်နှင့်အများကြီးပိုအတွက်အုပ်စုတစ်စု။ ငါသွားရောက်ကြည့်ရှုချင် ။ ဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု။ သို့မဟုတ်နေထိုင်အသက်ရှင်ဒီမှာ)။ ထို့နောက်ရှိပါတယ်)အဖြဲ။ လေးနှစ်အဘို့အ၊သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးကွက်တွင်ရလဒ်၊တစ်အများအပြားစိတ်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်နှင့်စစ်မှန်သောအပြောင်းအလဲ။ ဟေး၊ယောက်ျားလေးများ။ ကျနော်တို့ဧရိယာ၌ဟိုတယ်၏။ ရာသီဥတုကမိုးရာသီ၊ဒါကြောင့်သင်အဘို့အရှာနေတဲ့ကုမ္ပဏီ၊သင်ဖြုန်းနိုင်ဤဥပဒေအတူတူမောင်)မဂၤလာပါ၊လေယာဉ်အရေ°မှမက္ကစီကိုစီးတီးကနေမော်စကိုကနေတဆင့်မက်ဒရစ်။ ယခုလိုဗီဇာစပိန်မှလျှင်၊ပျံနှင့်ထွက်ခွာအဆိုပါဂိတ်သို့မဟုတ်အကူးအဇာလုံလောက်သောဖြစ်ပါသည်။
မိန်းကလေးများအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန် အမျိုးသမီးလိုတွေ့ဆုံ သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ ၁၈ နှစ် ၁၈ ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောခန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ အခမဲ့ဗီဒီယိုကိုအွန်လိုင်းချက်တင်ချိန်းတွေ့ ချိန်းတွေ့နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲအခမဲ့ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့မရှိပါ အခမဲ့ချိန်းတွေ့